Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Arabia na-ekwupụta ịkwụsị ịkwụ ụgwọ maka coronavirus
Airlines • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Air Arabia na-enye ndị ahịa ya mgbanwe ka ukwuu site na iwebata iwu mgbazigharị ego mgbanwe ọhụụ dabere na mgbochi njem ndị dị ugbu a ma nye ndị ahịa ohere ịhọrọ ụbọchị njem njem na-agbanwe n'ihi mmetụta nke COVID-19 coronavirus.
Ndị ahịa nwere ike ịgbanwe akwụkwọ ha dị ugbu a na nke ọhụụ emere rue Machị 31, 2020 maka njem rue Disemba 31, 2020 na obi ike rue elekere 72 tupu ọpụpụ. Nke a metụtara ụgbọ elu niile n'ofe Netwọk Air Arabia site na mpaghara ya anọ na UAE, Morocco, na Egypt.
Iwu ohuru a na enye ndi njem mgbanwe igbanwe akwukwo ha na akwughi ugwo na ugwo ha, na-egosiputa ntinye nke ndi Air Arabia inye mgbanwe ma buru uzo ndi ahia ha.
Ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ ụgwọ naanị ma ọ bụrụ na ọ dị n'oge ọ bụla ịghagharị ụgbọ elu ha. Ebe ikuku oku raara nye Air Arabia na ụlọ ọrụ ire ahịa dị na netwọkụ ha niile ga-enyere ndị ahịa aka ntinye akwụkwọ na nyocha ha.
Ihe ịrịba ama ndị a na-ahụkarị na ọrịa COVID-19 coronavirus gụnyere mgbaàmà iku ume, ahụ ọkụ, ụkwara, iku ume na nsogbu iku ume. N'okwu ndị ka njọ, ọrịa nwere ike ibute oyi baa, nnukwu ọrịa iku ume, akụrụ akụrụ na ọbụna ọnwụ.
Recommendationskpụrụ a kwadoro iji gbochie mgbasa ọrịa gụnyere ịsa aka mgbe niile, ikpuchi ọnụ na imi mgbe ụkwara na uzere, sie anụ na akwa. Zere inwe mmekọrịta chiri anya na onye ọ bụla na-egosi ihe mgbaàmà nke ọrịa iku ume dị ka ụkwara na uzere.